‘काल लिन आए’ को थाहा पाउने अनि भयको पूर्व जानकारी पाउने प्राणी – देशसञ्चार
कुकुरका अनेक क्षमताहरु
सुजाता खत्री कार्तिक २०, २०७५
आज (मंगलबार) कुकुर तिहार। कुकुरलाई खानेकुरा खान दिएर, फूलमाला लगाइदिएर पूजा गर्ने दिन। अरु दिन कुकुर नजिक पर्दा धपाउने पनि आज कुकुरलाई डाकीडाकी खाना खुवाउने चलन छ।
कुकुरका आफ्नै बानीहरु छन्, राम्रा नराम्रा दुवै।
प्रशंसा गर्नुपर्यो भने भन्ने शब्द कुकुरजस्तो अनुशासित, इमान्दार र सन्तोषी हुन्छन्। कुकुर स्वामीभक्त पनि हो। आफ्नो मालिकको लागि उ जे गर्न पनि तयार हुन्छ।
कुकुरका केही बानीहरु रुचाइँदैनन्। कुकुर रगरगी गाउँ, चोक डुल्छ। जसले दिए पनि खाइदिन्छ, जसको पनि जुठो खाने कुकुर हो। त्यसैले मान्छेलाई पनि गाली गर्दैै कहिलेकाँही भन्छन्, ‘कस्तो कुकुर जस्तो।’
कुकुरबाट मानिसलाई धेरै रोग पनि लाग्छन्, तर सबैभन्दा सुनिने रोग हो रेबिज। सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनको तथ्यांक अनुसार बर्सेनि विश्वमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु रेबिजको कारणले हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने यकिन तथ्यांक छैन, तर शुक्रराज शास्त्री सरुवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार अस्पतालमा आएकाहरुको मात्र संख्या हेर्ने हो भने वर्षमा १२ जना जतिको मृत्यु भएको छ र यो संख्या बढ्दो छ।
यस्तो जोखिम भएका कुकुर हामी पाल्छौँ र स्याहार गर्छौँ। अनि कुकुर तिहारको दिन पूजा पनि गर्छौँ
किन पूजा गरिन्छ कुकुर?
अलौकिक शक्तिका आधारमा भन्ने हो भने कुकुर सन्देश बाहक हो। कुकुरलाई यमराजको दूत पनि भनिन्छ। कुकुर एक्लै भुक्यो भने, अथवा रोयो भने फरक फरक सन्देश दिएको मानिन्छ। सबैले याद गर्ने कुरा हो, कुकुर कोही आएपछि कराउँछ।
कार्तिक २०, २०७५ मा प्रकाशित